Tapered ala agba, Deep uzo Ball agba, Ohiri Isi Block Iburu - Xinri
Anyị emeela nlezianya nyocha nke akụkụ ọ bụla ma na-agba, na-anwa ịnwe enweghị nsogbu dị mma n'aka ndị ahịa.GỤKWUO
7X24 awa ekwentị ma ọ bụ nkwado teknụzụ n'ịntanetị n'efu. OEM / ngwaahia ọrụ na-anabata.
Ọnụ ahịa uru
Factory kpọmkwem ahịa, ọ dịghị middlemen price iche.GỤKWUO
Linqing Xinri nkenke Iburu Co., ltd
Linqing XINRI nkenke amị Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na tapered ala agba, cylindrical ala agba, miri uzo bọl amị, ohiri isi ngọngọ amị, wheel ehiwe amị na inch nke na-abụghị ọkọlọtọ amị mmepụta enterprices. The ụlọ ọrụ nwere a ngụkọta nke ebe ihe karịrị 2 nde square ụkwụ, ẹdude mkpara 500 ndị mmadụ, nwere nile di iche iche nke elu metal nhazi akụrụngwa karịa 360 nkeji, ule equipments karịa 240 nkeji, Ugbu a, anyị ka na-achọ gị n'ụlọnga maka anyị XRL ika n'ụwa nile, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị ozugbo.
E reela XRL na mba karịrị 120 gburugburu ụwa. Ma maka ọrụ ugbo, imepụta textile, nsị, ibipụta ngwa dị iche iche na ọdụ ụgbọelu, na sistemụ ikuku, nnyefe ngwaọrụ, ọdụ ụgbọ mmiri, ihe egwuregwu ụmụaka ma ọ bụ maka ngwa ahụike, Medicalgbọala, XRL na-anọchite anya ihe kacha ala ahịa ahịa kacha elu. .
XRL rere ihe karịrị mba 120
150 nde +
Kwa Afọ zuru ụwa ọnụ ahịa nke karịa 150 nde dollar
700 nde +
Ikike nke afọ a na-emepụta kwa afọ karịrị nde 700
Anyị enwetala Asambodo Sistemụ Njikwa Ogo.
Anyị bụ ndị ọkachamara na-agba ngwaahịa
Oke ọsọ elu okpomọkụ
Ogologo ndụ ọrụ mfe ịnọgide na-enwe
Nwere ike hazie
Gịnị mere anyị ga-eji mesoo anyị?
Ebee ka anyị na-ebupụ?
Anyị na-enye a nso nke biarin gụnyere Tapered ala biarin, Deep uzo bọl biarin, Ohiri Isi ngọngọ biarin, Cylindrical ala biarin, Spherical ala biarin, wheel ehiwe biarin na ndị ọzọ. Na ọkwa sitere na obere biarin na ntanetị nke dị n'ime 20mm ruo nnukwu biarin na mpụta nke 500mm. Na mgbakwunye na nhazi bekee, anyị na-ewepụtakwa ọkwa na-abụghị ọkọlọtọ.
Ihe bụ ihe ọzọ, anyị na-emeputa maka Russia LADA, TZA, VPZ, SPZ, VBF na KG, na ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwekwara ike ịnye ọrụ OEM.
1. All na-amị Filiks, dị ka ibe ya bụrụ, mbịne, okpomọkụ n'imeso, egweri, nzukọ na mbukota, na-okokụre na anyị manufactory. Ọ bụ ya mere XRL Bearing nwere ike inye gị nkenke bọl na ihe nrịba ama na ọnụahịa kachasị ala ma nwee ike izute nnyefe na oge.
2. Dị ka ISO9001: 2000 gbaara emeputa, anyị ike ngwaahịa traceability usoro. E wezụga nke ahụ, XRL Co., nwere ndị ọrụ teknụzụ siri ike na injinia Japan iji dozie nsogbu dị iche iche na ntinye na ojiji nke biarin anyị.
3. Quality nkwa: 12 ọnwa quality akwụkwọ ikike, ego nwere ike deducted ma ọ bụ nkwụghachi ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla àgwà nsogbu.
1. Anyị nwere klas mbụ na-anwale akụrụngwa iji chọpụta na-ebu data dịgasị iche iche ma jikwaa àgwà nke agba. Mgbe ọ bụla biarin ga-mbụ achọpụtara ma àgwà ruru eru na-erughị eru amị ga-ewepụ ozugbo. Ya mere, anyị nwere ike ịnweta ntụkwasị obi nke onye ahịa buru ibu, ma nye ha ọtụtụ afọ.
2. Anyị nwere ikike R & D nke anyị, iji nyere ndị ahịa aka idozi nsogbu nke biarin ọkọlọtọ. Anyị nwekwara ike ịgbanwe akara nke ndị ahịa dịka akara ha chọrọ.
3. Anyị nwere ike hụ na anyị ahịa ndị kasị ezi uche ma ọ bụrụ na ị tụnyere na otu larịị àgwà biarin na China. Ọ kaara gị mma iji ọnụahịa na mma dị n'etiti ndị na-eweta ngwaahịa. Ma onye ọ bụla maara na ị nweghị ike ịzụta ngwaahịa kachasị elu na ọnụahịa dị ala, mana njide anyị bụ mma kachasị mma ma ọ bụrụ na ị jiri ọnụ nha.
Anyị ejirila ngwa ngwa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma. Anyị na-eme biarin 100% nwalere.
ihe pụrụ iche oyi Rolling technology maka mbịne usoro nke melite ike nke na-amị yiri mgbaaka na amị ndụ site mma ya metallographical Ọdịdị na metal eso akara.
Ihe omuma ohuru ohuru anyi di n'ime na nkpuchi di n'ime ya na onu nke na eme ka oru oma na ogologo ndu anyi.
Ewezuga ụlọ ụlọ, ebugharị XRL ebula ụzọ karịa mba 120 na mpaghara mba ofesi gụnyere Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Algeria, Saudi Arabia, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Peru, Bolivia, Chile , Kenya, Zambia, United States, Canada, Mexico wdg.
Anyị etinyeworị ndị ọrụ na South America mba dịka Peru na mba Africa dịka Kenya na Zambia, Ugbu a, anyị ka na-achọ onye ọrụ maka akara XRL anyị n'akụkụ ụwa niile, ọ bụrụ na ịnwere mmasị ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị ozugbo.